Ahụike Uche Lewisham - Bromley, Lewisham & Mindwich Mind
Ị nọ ebe a: Mbido > Ahụ ike uche Lewisham
BLG Mind na-enye ọtụtụ ndị ọrụ nlekọta ahụike ọgụgụ isi dị elu maka ndị okenye bi na mpaghara Lewisham. Nke a gụnyere nkwado pụrụ iche maka ndị si ojii, ndị Eshia, ndị agbụrụ pere mpe na ndị gbara ọsọ ndụ, maka ndị mum ọhụrụ, yana onye ọ bụla chọrọ enyemaka na uru.
Lewisham Community Ọdịmma
Lewisham Community Wellbeing na-enyere ndị obodo aka ịgbake n'ọrịa ọgụgụ isi ma lekọta ahụike ha.
Nkwado ndị ọgbọ
Ihe omume na otu dị iche iche iji kwado ndị okenye nwere nsogbu ahụike ọgụgụ isi nke ndị mmadụ nwere ahụmịhe nke nsogbu ahụike ọgụgụ isi na mgbake.
Ọrụ Ịgbaghara Onwe Onye
Ndị ọrụ mgbaghara onwe onye na South East London na -akwado ndị mmadụ nwụnahụrụ na Bexley, Bromley, Greenwich, Lambeth, Lewisham na Southwark.
Ndị nwere uche
Ndị nne na-eche echiche bụ otu ọdịmma nke na-enyere ndị inyom dị ime na ndị nne ọhụrụ aka ịkekọrịta ahụmahụ na ilekọta onwe ha n'oge ime ime na afọ mbụ ka a mụsịrị nwa.
Bụ ndị otu dị iche iche bụ maka ndị na-atụ anya / nna ọhụrụ ma ọ bụ ụmụ nwoke nwere ọrụ ịzụ ụmụ. Ha na-enyere ụmụ nwoke aka ilekọta ahụike ha n'oge oge na-agbanwe ndụ.
Uru Ntụle Nkwado
Ndụmọdụ na nkwado maka ndị okenye na-enwe nsogbu ahụike ọgụgụ isi na-etinye maka uru.
Nlekọta Ahụike Ọgụgụ Isi (PCMS)
PCMS na-akwado ndị mmadụ na-ahụ maka nsogbu ahụike ọgụgụ isi na ndị isi na ndị ọkachamara na-elekọta obodo na-elekọta ha.